Xaafadaha Seattle: Seward Park – Taariikh Kooban - HistoryLink.org
Xaafadaha Seattle: Seward Park – Taariikh Kooban
Seward Park waa xaafad koonfur-bari Seattle kaga taala taasoo magaceeda laga keentay beerta magaalada oo ku taalay Bailey Peninsula oo ku taal Lake Washington. 1911, afar sano kadib ku daristii in badan oo kamida waxa hadda la yaqaan koonfur-bari Seattle, Dolada Hoose, waxay kala wareegtey jasiirad la moodkii qoyska Baily si ay dhisaan beer loogu magac daro Xoog-hayaha Arimaha Debadda Maraykanka William H. Seward (1801-1872), oo lagu xasuusto u doodista iibsiga Maraykanka ee Alaska. Agagaarka oo magaca ka qaatay beerta waxay noqdeen sakad-sime. Dhammaystirka Jidhka Wayn ee Lake Washington-na wuxuu horumariyey gaadhista meeshaa. Halka xaafado badan oo Seattle ku yaala oo ay magacaabeen maalgaliyayaasha hantida ma-guurtada ah ay lahaayeen xuduudo cad, Seward Park wuu wareegay kadib dhiseyaasha magacuna wuxuu ka yaabiyey qaybo kamida Brighton Beach, Magaalada Hillman, iyo Lakewood labada dhinac ee Sakadda Koonfurta Orcas. Meeshu qoomiyd ahaan iyo dhaqaale ahaanba way kala duwan tahay waxayna xarunu tahay bulshada Yuhuudda ah ee Seattle.